ခြင်နိုင်ဆေးများ မရှိချိန်တွင် ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ကာကွယ်ခြင်း - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 07/06/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အန္တရာယ်အများဆုံး သတ္တဝါက ဘာလဲ။ အဖြေမှာ ခြင် ဖြစ်သည်။ ခြင်များနှင့် သူတို့ဖြန့်ဝေသော ရောဂါ များသည် သမိုင်းရှိ စစ်ပွဲများအားလုံးထက် လူများစွာကို သေစေခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တွင်ပင် ခြင်များမှ တစ်ဆင့် ကူးစက် သော ငှက်ဖျားရောဂါသည် လူပေါင်း ၂-၃ သန်းကို သေစေ သည်။ နှစ်စဉ် သန်းပေါင်း ၂၀၀ နှစ်အထက်ကို ရောဂါကူးစက် စေသည်။ ဆယ်သန်းကျော်သည် ခြင်မှ တစ်ဆင့်ကူးစက် သော အခြားရောဂါများဖြစ်သော filariasis ၊ အသားဝါရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းနာရောဂါတို့ကို ခံစားနေရသည်။ Zika ဗိုင်းရပ်စ်၏ ခြောက်လှန့်မှုကြောင့် ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ကာကွယ်ရန်မှာ လူများ၏ စိတ်တွင် ပိုမို စွဲမြဲနေသည်။
1MPH ထက်မြင့်သော လေပြေလေညှင်းသည် ခြင်များ ပျံသန်းရန် အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ နွေရာသီ အပြင်ထွက်ရာ တွင် လေတိုက်သောနေရာကို ရွေးချယ်ပါက အလုပ်ဖြစ်ပါ သည်။ လျှပ်စစ်ပန်ကာများသည် ကောင်းမွန်သော ခြင် အတား အဆီးများဖြစ်သည်။ လေစီးကြောင်းကို သင့်ခန္ဓကိုယ်၏ အောက်ပိုင်းကို ဦးတည်းထားပါ။ ခြင်များသည် လေကို ရှောင်ရန် မြေကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ပျံသန်းသောကြောင့် ပန်ကာ လေအားကို အောက်သို့ ဦးတည်ထားပါ။
အသက်ရှူမှန်အောင် နှလုံးကို အနားပေးပါ။
ခြင်များသည် အစာတွေ့ရန် အဓိကရှာသော အရာမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ဖြစ်သည်။ သင်၏ နှလုံးခုန်နှုန်း သည် မြင့်တက်နေပါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် CO2 ကို ပိုပြီး ထုတ်လုပ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ စပ်သောအစာများ စားခြင်း စသည်တို့သည် သင်၏ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်ကို မြန်စေပြီး CO2 ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်စေသည်။ သင့်ကို ခြင်များ ပိုပြီးကိုက်စေသည်။
ထူထဲစွာ ရက်လုပ်ထားသော အဝတ်များ ဝယ်ပါ။
ခြင်များသည် ထူထဲစွာ ရက်လုပ်ထားသော အဝတ်များကို မထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ ချည်ထည်နှင့် ပိုက်ဆံလျှော်ထည်များ သည် ကြမ်းပိုးကိုက်ခြင်းကို မခံနိုင်ပါ။ သဘာဝပစ္စည်းကို တုပ ရန် ဓာတုနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အမျှင်များ အထူးသဖြင့် နည်းပညာမြင့် အားကစား အဝတ်များသည် ခြင်များ မကိုက်နိုင်အောင် ထူပါသည်။ နေပူကာကွယ်သော အဝတ် အစားများသည်လည်း ခြင်မကိုက်နိုင်အောင် ထူပါသည်။
နေ့အလင်းရောင်ရသော အချိန်များတွင် ခြင်များသည် အမြင်အာရုံကို အသုံးပြုပြီး အစာရှာကြသည်။ ခြင်များသည် မြေကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ပျံသန်းသောကြောင့် ကောင်းကင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများကို ဦးတည်ရှာဖွေကြသည်။ မှောင်သောအရောင်များကို မြင်သာပြီး တောက်သောအရောင်များ ကို မြင်ခဲသည်။
Lemon eucalyptus oil သည် လူသိများ သော သဘာဝ ခြင်နိုင်ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ၁၉၄၀ မှစ၍ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရောဂါ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှု စင်တာ (CDC) က eucalyptus oil သည် ခြင်နိုင်ဆေးတွင် ပါဝင်သော ထိရောက်သော ပါဝင် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုထားသည်။
Lemon eucalyptus oil ၃၂ရာနှုန်းပါသော ဖျော်ရည် သည် ခြင်များရန်မှ ကာကွယ်မှုကို ၃ နာရီကြာပေးနိုင်သည်ဟု မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုက ဆိုသည်။ ခြင်များရန်မှ ကာကွယ်မှုကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက် ပေးနိုင်သည်။
ကြိတ်ချေထားသော လာဗင်ဒါပန်းများသည် ခြင်များကို ပြေးစေသော အနံ့နှင့် အဆီကို ထုတ်ပေးသည်။ အမွေးမရှိ သော ကြွက်များတွင် လေ့လာမှုအရ လာဗင်ဒါအဆီသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော ခြင်များကို နှိမ်နင်းရန် ထိရောက်သည် ဟု တွေ့ရသည်။ လာဗင်ဒါသည် အကိုက်အခဲပျောက်ခြင်း၊ မှို ကာကွယ်ခြင်း၊ သွေးဆိပ်တက်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း စသော စွမ်းရည်များ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ခြင်ကိုက် ခြင်းကို ကာကွယ်သည့်အပြင် အရေပြားကို ချောမွေ့စေ သည်။
သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်သည် ပန်းသီးဆော့ သို့မဟုတ် အုတ်ဂျုံမုန့်၏ အပေါ်လွှာတစ်ခုထက် ပိုပါသည်။ ထိုင်ဝမ်တွင် ဦးစီး ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက် အဆီသည် ခြင်သားဥများကို သတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသောခြင်များ ကိုလည်း နှိမ်နင်းနိုင် သည်။ အထူးသဖြင့် အာရှခြင်ကျားများကို ဖြစ်သည်။
ငှက်ဖျားခြင်များကို နှိမ်နင်းရာတွင် စမုန်ဖြူအဆီသည် ကောင်းမွန်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန် လေ့လာမှု တစ်ခုအရ အမွေးမရှိသော ကြွက်၏ အရေပြားတွင် ၅ ရာနှုန်း စမုန်ဖြူ အဆီလိမ်းခြင်းသည် ကာကွယ်မှုနှုန်း ၉၁ ရာနှုန်းကို ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ စမုန်ဖြူ အရွက်များကို မီးပုံထဲသို့ ပစ်နိုင်သည်။ သုတေသနအရ မီးလောင်နေသော စမုန်ဖြူ အရွက်များသည် ၆၀-၉၀ မိနစ်အတွင်း ၈၅ ရာနှုန်း ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
Bite Blocker for Kids ( ပဲပိစပ်ဆီ ၂ ရာနှုန်း) ကဲ့သို့ ပဲပိစပ် အခြေခံသော ထုတ်ကုန်များသည် ခြင်များရန်မှ ရေရှည် ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်ဟု University of Florida Medical Entomology Laboratory က ဆိုသည်။
Natural Mosquito Repellents That Work. http://commonsensehome.com/natural-mosquito-repellents/
6 Ways To Stop Mosquitoes From Feasting On You—And6Common Tactics That Just Don’t Work. http://www.prevention.com/health/stop-mosquito-bites
10 Natural Ingredients That Repel Mosquitos. http://www.healthline.com/health/kinds-of-natural-mosquito-repellant#Naturalmosquitorepellents1